အတန်ဆုံး အလန်းဆုံး Set ကိုချပြပေးလိုက်တဲ့ MARC JACOBS BEAUTY ရဲ့ Enamored With Coconut: Complexion and Gloss Set! | CosmeticMyanmar
Home » Article » အတန်ဆုံး အလန်းဆုံး Set ကိုချပြပေးလိုက်တဲ့ MARC JACOBS BEAUTY ရဲ့ Enamored With Coconut: Complexion and Gloss Set!
မကြာသေးမီက MARC JACOBS BEAUTY ကနေ Enamored With Coconut: Complexion and Gloss Set လေးကို ဘယ်မှာမှမရနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ဒီ Set မှာ ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့
0.05 oz/ 1.7 mL Petite Enamored Hi-Shine Gloss Lip Lacquer
1 oz/ 30 mL Under(cover) Perfecting Coconut face Primer
0.8 oz/ 24 mL Dew Drops Coconut Gel Highlighter
3.8 oz/ 112.mL Re(cover) Perfecting Coconut Setting Mist တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Under(cover) Perfecting Coconut face Primer ဟာ မိတ်ကပ်ကြာရှည်ခံအောင် ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပြီး ရေဓာတ်ကိုလည်း ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ သာမန်အသားအရေမှစပြီး ခြောက်သွေ့တဲ့အသားအရေပိုင်ရှင်တွေအထိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မိတ်ကပ် Foundation အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ ချောမွေ့ပြီး လိမ်းရပိုမိုလွယ်ကူလာတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။
Drops Coconut Gel Highlighter ကတော့ ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့ Look မျိုးရအောင်ဖန်တီးပေးပြီး လင်းလက်တဲ့ အသားအရေကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှာပါ။ တမျိုးတည်းသီးသန့်အသုံးပြုနိုင်သလို Foundation ဒါမှမဟုတ် Primer နဲ့တွဲဖက်ပြီးလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Re(cover) Perfecting Coconut Setting Mist ကတော့ သင့်ရဲ့အသားအရေကို ပြန်လည် Glow ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပြီး ၂၄ နာရီကြာ မိတ်ကပ်များ ပျက်လွင့်မသွားအောင် ထိန်းထားပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
ဒီ Coconut Set မှာပါတဲ့ Facial Products တွေဟာ အုန်းသီးအဆီအနှစ်ကိုအခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် ရေဓာတ်ကို အဓိက ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ အသားအရေစိုပြေဝင်းပလာပြီး ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့အသားအရေမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီပေါ့။ Lip Gloss ဟာလည်း နှုတ်ခမ်းသားမှာ လိုအပ်နေတဲ့ အာဟာရတွေကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်တာကြောင့် ကွဲအက်ခြောက်ကပ်ခြင်းမျိုးမဖြစ်စေပဲ စိုပြေရွှန်းလဲ့တဲ့ နှုတ်ခမ်းသားကို ဖန်တီးပေးမှာပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဒီ Products တွေကို သီးခြား ဝယ်မယ်ဆိုရင် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ဒေါ်လာ ၁၂၀ လောက်ကုန်ကျမှာဖြစ်ပြီး ဒီ Set လေးကို ဝယ်ယူရင်တော့ ၉၅ ဒေါ်လာ သာ ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Limited Edition အနေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာ ပျိုမေတို့ အကြိုက်တွေ့မှာ အသေအချာပဲပေါ့။
Image Source: www.marcjacobsbeauty.com